စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 29/02/2020)
ဥရောပကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်တည်နေရာနှင့်မတူဘဲဖြစ်ကြောင်းချမ်းလအတွင်းအခြို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကျက်သရေရှိပါတယ်. အမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်, နှင့်မျှမတို့နှစ်ဦးကိုထိုအရပ်တို့၌တူညီသောခံစားချက်နှင့်လေထုရှိ. တကယ်တော့, များစွာသောလူချမ်းလအတွင်းမြို့ရွာနှင့်မြို့ကြီးများတစ်ဦးမှခရီးသွားနဲ့တူခံစားမိကြောင်းပြောပါ အသစ်ကဦးတည်ရာကို. ဆောင်းရာသီလုံးဝဥရောပအသွင်ပြောင်းဖို့စိတ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, နှင့်အလှည့်အတွက်, သူတို့နှစျ၏အခြားမည်သည့်အချိန်ကတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သောဧည့်သည်တစ်ဦးကိုလုံးဝအသစ်သောအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီး. အဆိုပါကျသွားဆီးနှင်းကရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အရာခပ်သိမ်းအလွန်ပွဲလမ်းသဘင်စေအရေးကြီးသောအားလပ်ရက်တွေအများကြီးဆောင်တတ်၏. အပြောင်းအလဲများနှင့်အလှအပ၏စည်းစိမ်နေသော်လည်း, အရာအားလုံးသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးက. မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် ခရီးသွားရန် လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားအစက်အပြောက်အချို့, ဤအသွားရောက်လည်ပတ်5ဥရောပ၌ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနေရာများ.
သင်အလွန်အံ့သြစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ Wonderland ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဘူဒါပက်ထက်မထပ်မံကြည့်ရှု. ဒါဟာဆောင်းကာလကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမြို့ဖြစ်၏ထွက်ပြေးဖို့. အများအပြားဘူဒါပက်တတ်နိုင်နှုန်းထားများဖြစ်ပါတယ်ရှေးခယျြသောအဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ. သင်တစ်ဦးတတ်နိုင်မှုနှုန်းများအတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့တွေ့ကြုံခံစားရ. ဘူဒါပက်ခရီးသွားဧည့်များ၏အများအားဖြင့်ပြည့်ဝ၏ နွေရာသီကာလအတွင်း. သို့သျောလညျး, ဆောင်းတွင်းကာလအတွင်း, သငျသညျအနည်းဆုံးလူအစုအဝေးနှင့်အတူမြို့အလှတရားကိုတွေ့မြင်ရ. အပြင်ကနေ, သငျသညျမီးဖိုထဲကကိတ်မုန့်နှင့်အရသာရှိတဲ့စပျစ်ရည်ကိုအများကြီးရ.
သငျသညျဥရောပဆောင်းရာသီစိတ်ကူးသည့်အခါဗင်းနစ်စိတ်ကိုလာရန်ပထမဦးဆုံးအရာမဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သို့သျောလညျး, သငျသညျဆောငျးတှငျးစဉ်အတွင်းတူးမြောင်း၏မြို့သွားရောက်လျှင်, သငျသညျအစဉျအမွဲကမှတ်မိပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါစည်ကားလမ်းများနှင့်ဆူညံကဖေးချ toned နေကြတယ်, သငျတို့သနွေရာသီမပြနိုင်သည်ကိုမြို့သူမြို့သားတစ်ဦးအခြမ်းကိုတွေ့မြင်. နွေရာသီလများအပေါငျးတို့သ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ပြီးပြည့်စုံစေတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းလေထုနဲ့အစားထိုးနေသည်. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်အခါမြို့သူမြို့သားအလွန်လျင်မြန်စွာဘဝမှကြွလာသည်ဟုမှတ်စုမရှိမဖြစ်အရေးပါသည် ဗင်းနစ်ပွဲတော်ကြီး ပတ်ပတ်လည်လိပ်. တိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ, မြို့သူမြို့သားဧည့်သည်တစ်ဦးမြင့်တက်ရရှိသွားတဲ့, နှင့်မရနိုင်ပါဘူးမျက်နှာဖုံးများမြို့များ၏လမ်းများရေလွှမ်း. ဘဝကိုဖို့မြို့ရောင်စုံသမိုင်းကိုဆောင် ခဲ့. လမ်းများပေါ်ရှိ Creative ဝတ်စုံနှင့်သိပ်ပြီးမ. သင်ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်တဲ့သွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလိုပါက, သင့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာဗင်းနစ်ထား.
ဥရောပလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပါတယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကဲ့သို့အရူပနှင့်အသုံးပြုမှု Wonderland အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်ဖြစ် တစ်ဦးကရထား Save အဲဒီမှာရဖို့. ဆောင်းလများတွင်တွေ့ကြုံခံစားဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်စွန့်စားရရှေ့ဆက်တစ်ဦးရဲရင့်ခြေလှမ်းယူ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့ဆောင်းရာသီဦးတည်ရာနေရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)